ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2022-01 > ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်များသည် အကျပ်အတည်းကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် မလွယ်ကူပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မေ့သွားပြီဟု ထင်မြင်လာသောအခါတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အဖြေမပေးခဲ့သောကြောင့် ပို၍ခက်ခဲပါသည်။ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည်နှင့် အလွန်ကွာခြားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောအခါ၊ ဤအခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ပြုမူပုံကို လွဲမှားစွာ နားလည်မှုရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ကတိတော်တွေအကြောင်း ဖတ်ပြီး ဆုတောင်းပြီး မကြာခင်မှာ ပြည့်စုံလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်- “ဒါပေမယ့် ငါမင်းနဲ့ နီးစပ်နေပြီ၊ မင်းကို ကယ်တင်ချင်နေပြီ၊ ငါ့အကူအညီက မလာတော့ဘူး။ ယေရုရှလင်မြို့ကို ကယ်တင်ခြင်း နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်း ကို ပေး၍ ဣသရေလ အမျိုး၌ ငါ့ဘုန်းကို ပြလိုသည်” (ဟေရှာယ ၄၊6,13 HFA)။
ဟေရှာယမှအခန်းငယ်သည် သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခွင်လုံးတွင် ပြန့်ကျဲနေသောဖော်ပြချက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်ကတိပြုထားသည်။ ၎င်း၏အခြေအနေတွင်၊ ဗာဗုလုန်ရှိဂျူးများကို ယုဒပြည်သို့ပြန်ခေါ်ဆောင်လာမည်ဟု ဘုရားသခင်၏အာမခံချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းသည် ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းကိုလည်း ညွှန်ပြသည်။
ဗာဗုလုန်မှာ ပိတ်မိနေသေးတဲ့ ဂျူးတွေက ဘယ်အချိန်သွားလို့ရလဲလို့ မေးတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် သူ၏သေတတ်သောလူများထံမှ ဘုရားသခင်ထံ ပုံမှန်ထမြောက်ကြောင်း အော်ဟစ်သံကို ကြားခဲ့ရသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် သူ၏နန်းစံချိန်ကို စောင့်မျှော်နေသော အကျဉ်းကျနေသော ကလေးသူငယ်များ တွင်လည်း ၎င်းကို ကြားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာများကို သိသောကြောင့် တုံ့ဆိုင်းမည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောခဲ့သည်။
ပရောဖက်ဟဗက္ကုတ်သည် လူတို့၏မတရားမှုများကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး သူ၏ခေတ်တွင် လုပ်ဆောင်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်အား တိုင်တန်းသောအခါတွင်၊ ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်မည့် ရူပါရုံနှင့် အာမခံချက်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်က “ပရောဖက်ပြုချက်မရသေးပါ။ ကြွလာချိန်၌ ပြည့်စုံလိမ့်မည်၊ နောက်ဆုံးတွင် လှည့်ဖြားခြင်းမပြုဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထွက်လာလိမ့်မည်။ ဆွဲငင်နေရင်တောင် စောင့်ပါ။ ဧကန်မုချ ပေါ်လာလိမ့်မည်” (ဟဗက္ကုတ် 2,3).
ရှည်လျားသောခရီးတွင် ကလေးများအားလုံးသည် ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင် ၎င်းတို့၏မိဘများကို ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေပြီး မည်မျှကြာမည်ကို သိချင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေးများမှ လူကြီးဘဝသို့ ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ အချိန်၏ခံယူချက်သည် ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုမြန်ဆန်လာပုံရသည်၊ သို့သော် ဘုရားသခင်၏အမြင်ကိုခံယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ မလွဲမသွေ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်မှာ မှန်ပါသည်။
“အတိတ်ကာလ၌ ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်များအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများကို စကားများစွာပြောခဲ့သည်။ ယခုမူကား၊ အချိန်စေ့သောအခါ၊ သားတော်အားဖြင့် ငါတို့အား မိန့်တော်မူပြီ။ အဆုံးတွင် အရာအားလုံးသည် သူ၏အမွေအဖြစ် သူပိုင်ရမည်ဟု ဘုရားသခင်က သူ့ကို ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ကိုယ်တော်အားဖြင့် အစအဦး၌ ဤလောကကိုလည်း ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။” (ဟေဗြဲ၊ 1,1-2 GNB)။
ဟေဗြဲလူများထံပေးစာတွင် သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းသည် “အချိန်ကာလ၏အဆုံး” ကို အမှတ်အသားပြုပြီး ယင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ကဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်နှုန်းသည် ဘုရားသခင်၏အမြန်နှုန်းနှင့် မည်သည့်အခါမျှ တူညီမည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေပုံရသည်။
ရုပ်လောကကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အချိန်ကို ရှုထောင့်က ကြည့်ဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကမ္ဘာသည် နှစ်ပေါင်း လေးဘီလီယံကျော် သက်တမ်းရှိပြီး စကြာဝဠာသည် နှစ်တစ်ဆယ့်လေးဘီလီယံနီးပါး သက်တမ်းရှိမည်ဟု သုံးသပ်ပါက၊ နောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်သည် ခဏကြာသွားနိုင်သည်။
အချိန်နှင့်အမျှ နှိုင်းယှဥ်ကြည်ခြင်းထက် အခြားသောအဖြေတစ်ခုရှိပါသည်၊ ခမည်းတော်၏တာဝန်များကို နစ်မွန်းစေသည်- “သင်တို့အားလုံးအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များ၌ သင့်အားသတိရပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ သင်၏လုပ်ငန်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်တွေးတောပါ၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကို မြော်လင့်ခြင်း၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သည်းခံခြင်း၌သင်တို့၏အမှု၌” (1. သက် 1,2-3) ။
နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေရတာကို အံ့သြဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေပုံမျိုး မရှိပါဘူး။